LaseStavropol, esisogwini Insimu Russian Federation, akuyona kuphela umkhakha futhi ibhizinisi, kodwa futhi isikhungo samasiko yesifunda. Kulesi sigodi kukhona lenqwaba izindawo ukubungaza ezihlukahlukene. Ngingayaphi ngisuka nengane e laseStavropol?
Kuze kube manje, kuye kwaba nzima isithakazelo izingane kwezemidlalo evamile njengokudlala ibhola lomphebezo noma ibhola. Ngakho izingane ukuthi uzama ukuthola abaningi amakilasi ezintsha. Omunye yezemidlalo ethandwa kakhulu ezinsukwini zethu baba karting, lokusho ukugibela leli izimoto miniature ezemidlalo. Catching karting, umntwana uthola hhayi kuphela eziningi ukuzijabulisa futhi imizwelo eyakhayo, kodwa futhi kusukela zisencane ngcono ukuthuthukiswa zabo ezingokwenyama.
Ezokuzijabulisa isikhungo "Moskvik"
Njalo ngempelasonto maphakathi aphethwe ezihlukahlukene izinhlelo opopayi, okuyinto angabona yonke into. Ngemva isethulo mahhala. Ngaphezu kwalokho, "Moskvike" njalo aphethwe imincintiswano ehlukahlukene lapho izingane uthole imiklomelo ehloniphekile. Futhi, isikhungo ifakwe ezihlukahlukene slot machines futhi has ekhishini lalo. Ngakho izingane ngeke siphazanyiswe emidlalweni yabo.
Ezokuzijabulisa isikhungo "Isiqhingi"
Kuphi e laseStavropol nengane? I "isiqhingi." Yezefundo kungokwalabo cafe umndeni. Ngakho-ke, ifakwe playroom omkhulu izingane. Kuleli qophelo, izingane akwazi ukugibela phezu Maze okuyinkimbinkimbi, ukudlala emoyeni hockey futhi isiqophi imidlalo, kanye ukugibela leli senhliziyo noma amaslayidi.
Ezemidlalo nokuzijabulisa isikhungo "Wik Front"
Paintball isibe omunye ukuzijabulisa lusetshenziswa abantu babo bonke ubudala. Lo mdlalo iqembu ikuvumela ukuba bahlanganyele imincintiswano wonke umndeni, okwenza amalungu ayo basondelana. On indawo enkulu enkabeni nje amasayithi ambalwa nge amazinga ehlukene obulukhuni. Ngakho-ke, ukudlala Paintball can izingane yanoma yimuphi yobudala. Ngaphezu kwalokho, isikhungo sibandakanya zihlalo endaweni enkulu. Kukhona izoso, gazebos nokuzijabulisa kulabo balinde isikhathi sabo.
Kuphi nezingane e laseStavropol? I Circus "legatsha." Mhlawumbe, ngeke kube khona umntwana owayezoba ongafuni ukuyibuka ukusebenza izilwane. Ikakhulukazi isikhungo laseStavropol ngokuvamile kakhulu ihambisane ezihlukahlukene babuka emasekisini Amazing show. Ngakho-ke, lapho sivakashele kwezamahlaya Uyohlale izingane imizwa ezintsha kanye nemigqondo.
Ngo laseStavropol, kukhona ezimbili nje izikhungo ezinjengalezi, enye yazo ibizwa ngokuthi "Zooekzatarium". Le sayithi iqukethe engavamile nangezilwane eziphila kuzo. Ngakho-ke, uma ingane ayisekho ezithakazelisayo ukucabangela izilwane evamile, kungaba bamangale e zoo wesibili njalo.
Ngingayaphi ngisuka okwesikhathi zihamba laseStavropol? Ngo sezulu esihle, kutuswa ukuba uvakashele nepaki komuzi. Kuleli qophelo, thina baqoqa ezikhangayo ezihlukahlukene kakhulu futhi kujabulise. Ngakho-ke, zonke izinyane ungathola umdlalo ngendlela esilindele yakho.
ukubukwa Amazing ukuthi idlalwa onodoli uyohlale abe nesithakazelo ezinganeni. Ngesikhathi esifanayo ukuvakashela izikhungo ezifana kuyosiza abazali ukubandakanya izingane isiko kusukela zisencane.
Ngingayaphi ngisuka e laseStavropol uphumule nabangani owesifazane? Ukuze izakhamuzi abasha esebenzayo kanye nezivakashi emzini inikeza inala izikhungo, okungaba umqondo omuhle ukuba uchithe isikhathi sakho khulula.
Ngakho, ngo-laseStavropol ukuvula amabhiliyade amaningi kanye bowling. Ngo ngamunye wabo nesimnandi kunikela ukuphumula ngokwanele.
Kubathandi kusihlwa ukuzijabulisa kanye obala nightclub eziningana. Ngokwesibonelo, ethandwa kakhulu "Friday". I club unethuba hhayi kuphela ukuzijabulisa nabangane, kodwa futhi ukuhlela usuku romantic nengxenye yayo yesibili.
Kuphi nentombazane e laseStavropol? Ungakwazi ukuya «Z-Club". Lapho, abantu abasha dancing umculo DJs professional. Omunye amakilabhu esiyinqaba wacabangela Panamera, njengoba itholakala endaweni ka 6 amamitha ngezansi phansi ukujula. Kuleli qophelo kukhona imishini eziningi zalezi zinsuku, okuvumela ukuba wenze umculo nje Amazing kuphela.
Kuphi I-ezamasiko? Abathandi ezokungcebeleka ezolile futhi kulinganiswa njengoba kukhona izindawo ezimbalwa. Ngokwesibonelo, i-Museum of Fine Arts yesiFunda. Itholakala endlini enkulu. Ngakho-ke kunesithembiso inombolo enkulu ziphephile. Ngaphezu umbukiso nsuku zonke, isikhungo njalo elibamba ukusebenza ezigcawugcawu, amakhonsathi, imikhosi kanye efanayo ukuzijabulisa ngemisebenzi.
Kuphi e laseStavropol? Esikhathini Museum. Kule ndawo kukhona zonke izinhlobo amaqoqo ziphephile. Noma kunjalo, bonke kuhluke focus futhi ube izindaba zabo ngabanye. Ngokwesibonelo, e-Museum ungabona iqoqo uyathola kwezazi nemivubukulo okuqala isikhathi umSkithe.
Imidlalo yaseshashalazini okuhloswe ngaso umbukeli yesimanje. Ngakho-ke, repertoire ikhethwa ngokunembile njalo ngenyanga. ukusebenza okusha aphethwe kule ndawo zonke izinsuku. Ngakho-ke, hamba kuze yaseshashalazini njalo kuyoba ezithakazelisayo.
Manje kuyacaca ukuthi baya kuphi e laseStavropol. Yiqiniso, lena kude zonke izindawo ungavakashela kuleli dolobha elihle. Ngaphezu zonke izinhlobo izikhungo, edolobheni elidumile eziningi ezikhangayo. Ngokwesibonelo, bonke izivakashi bayakhuthazwa ukuvakashela yisikhumbuzo Okuphakade Inkazimulo, lesikhumbuzo Guardian Angel, endaweni Alexander, umthombo, "Ukugeza izingane", futhi iKazan Cathedral. Ngayinye yalezi zindawo has zayo siqu elithakazelisayo umlando eyaqala ezikhathini zasendulo.